လူငယ်အများစု ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ညဘက်အိပ်မပျော်ခြင်း ပြဿနာကို ဘယ်လိုကုစားမလဲ | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
အခုခေတ်လူငယ်တွေကြားထဲ ညအိပ်မပျော်တာဟာ လူငယ်တော်တော်များများ ကြုံလေ့ရှိတဲ့ အရာတစ်ခုလို ဖြစ်လာပါတယ်။ ညဘက် မအိပ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ အမျိုးမျိုး ရှိကြမှာပါ။ ညဘက်တွေမှာ ဂိမ်းဆော့နေလို့ ဖြစ်စေ၊ မနက်အကြာကြီး အိပ်မိလို့ ညဘက် အိပ်မပျော်လို့ဘဲ ဖြစ်စေ၊ Social Media တွေကို လွန်လွန်ကြူးကြူး အသုံးပြုနေတာကြောင့် ဖြစ်စေ၊ စသဖြင့် အကြောင်းပြချက်များစွာနဲ့ ညဘက်တွေ မအိပ်ဖြစ်တာ များလာပြီး နောက်ပိုင်း မျက်လုံးက အကျင့်ပါသွားတာမျိုး တော်တော်များများ ဖြစ်လာကြပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်လာရာကနေ Insomnia လို့ခေါ်တဲ့ အိပ်မပျော်တဲ့ ပြဿနာတွေ ပုံမှန်ထက်ကို များပြားလာပါတယ်။ အရင်က ဆက်တိုက် ညမအိပ်ထားတဲ့ အကျင့်ကြောင့် အိပ်ချိန်ရောက်လာရင်တောင် အိပ်လို့မရတာ၊ အိပ်ချင်ပေမယ့် မအိပ်နိုင်တာ၊ အိပ်ပျော်ဖို့ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ကြိုးစားနေရတာ စတာတွေ ဖြစ်လာကြပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ညဘက် အိပ်မပျော်တာတွေ များလာတဲ့အခါ မိမိရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း ထိခိုက်မှုတွေ များပြားလာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောတဲ့ ထိခိုက်မှုဆိုတာ Physical ပိုင်းရော၊ Mental/Emotional အပိုင်းကိုပါ ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တစ်ချို့သော ညဘက်အိပ်မပျော်တဲ့ သူတွေဟာ မိမိကိုယ်တိုင်တောင် မသိလိုက်ဘဲ စိတ်ရောဂါဝေဒနာ ဖြစ်နေတတ်တာမျိုးလည်း ရှိတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ သိရပါတယ်။
ဒါဆိုရင် ညအိပ်မပျော်တာနဲ့ စိတ်ရောဂါ ဘယ်လိုများ ဆက်စပ်နေသလဲ?
လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်း (Brain Wave) တွေက ဦးနှောက်ကို နှိုးဆွပေးနိုင်မှု နည်းပါးလာတဲ့အခါ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ အိပ်မပျော်ခြင်းကို စတင်ခံစားလာရပါတယ်။ ဒီလိုအိပ်မပျော်တာက တစ်ဆင့် စိတ်ကစဉ့်ကလျား​ဖြစ်တာ၊ ထင်​ယောင်ထင်မှားဖြစ်တာ၊ စိတ်​ခြောက်ခြားလာတာ စတဲ့ဆိုးကျိုးတွေအပြင် စိတ်ကျရောဂါ၊ စိတ်ခံစားချက် အတက်အကျ အရမ်းမြန်တာ၊ နှလုံးခုန်မြန်ပြီး အသက်ရှုမဝတာ စတဲ့​ စိတ်ရောဂါကို ဦးတည်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေအထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုလက္ခဏာတွေ ကြုံတွေ့နေရပြီ ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ကို ပုံမှန်ထက် ပိုပြီးဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
ဒါဆို မိမိတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်ကြမလဲ?
ဦးနှောက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ Wave တွေကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ တရားထိုင်ခြင်း (Meditation) ပါပဲ။ တစ်နည်းပြောရရင် စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် တတ်နိုင်သမျှ ထိန်းညှိလိုက်တာမျိုးပါ။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့ကို နာရီဝက်ခန့် မဖြစ်မနေ တရားထိုင်ပေးပါ။
ယောဂကို တစ်နေ့ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ပုံမှန်ဆော့ပေးခြင်းက ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို တည့်မတ်အောင် ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထူးကောင်းမွန်တဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ကြည်လင်နေရင် ဦးနှောက်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က သာမန်ထက်ပိုပြီး မြင့်မားနေတတ်ပါတယ်။ ရယ်မောခြင်းက စိတ်ကို ကြည်လင်စေပြီးတော့ ဦးနှောက်ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ လှိုင်းတွေကို သာမန်ထက် ပိုပြီး ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရယ်မောစေမယ့် အရာတွေ၊ ကိုယ့်ကို ပျော်ရွှင်စေမယ့် အရာတွေအတွက်လည်း အချိန်ပေးပါ။
၄။ ဂီတ နားထောင်ခြင်း
Stress ပိပြီး အိပ်မပျော်ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ဦးနှောက်လှိုင်းတွေကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့ ဆေးက ဂီတပါ။ ညဘက်အိပ်ခါနီးအချိန်မှာ ငြိမ့်ညောင်းသာယာတဲ့ ဂီတသံစဉ်တွေကို နားထောင်ပေးခြင်းက သင့်စိတ်ကို တည်ငြိမ်စေပြီး အိပ်ပျော်စေဖို့အတွက်လည်း အထောက်အကူ ပြုစေမှာပါ။
ဦးနှောက်ရဲ့ လှိုင်းတွေကို ထိန်းညှိပေးဖို့နဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့နည်းပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အိပ်စက် အနားယူနိုင်ဖို့အတွက် နားထောင်သင့်တဲ့ ဂီတသံစဉ်အချို့ကိုတော့ အောက်က လင့်ခ်တွေမှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Relaxing Piano, Guitar, Cello, Violin & Flute
Sleep Music delta wave
Peaceful Piano Music & Guitar Music
Relaxing Music, Best Collection!
What's New Read 41 times